Banyere Anyị - Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd.
Nanjing Liming Bio-ngwaahịa Co., Ltd. hiwere na 2001, ụlọ ọrụ anyị abụrụla ọkachamara na mmepe, nrụpụta na ịre ahịa ngwa ngwa maka ọrịa na-efe efe ọkachasị STDs. Ngwaahịa anyị egosila arụmọrụ yiri ya ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ (gụnyere PCR ma ọ bụ ọdịbendị) nke na-eri oge ma na-akwụ ụgwọ. Iji nyocha anyị ngwa ngwa, ma ọ bụ ndị ọrịa ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike nwere ike ịchekwa oge dị ukwuu maka ichere n'ihi na ọ chọrọ naanị 10 nkeji.
Anyị na-a payinga nlezianya anya na usoro mmesi obi ike na irube isi na iwu ugbu a maka ngwaọrụ ọgwụ maka mmepụta, njikwa mma, nchekwa, njem na oru na-akwado, na-eme ka ngwaahịa dị elu iji jeere ndị ahịa anyị ozi niile ụwa.
Site na mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke COVID-19, mba dị iche iche gburugburu ụwa na-agbasi mbọ ike ịchọpụta ma chịkwaa ọrịa a n'oge. Anyị amalitela nyocha ọhụụ ọhụrụ, nke na-emetụta ngwa ngwa na nke doro anya maka usoro nyocha nke COIVD-19.
Ebumnuche anyị bụ ịbụ onye na - eweta ihe ngwọta POCT na anyị na - achọ gaa n'ihu isoro gị rụọ ọrụ dị mma maka ahụike mmadụ.
E hiwere ụlọ ọrụ ahụ wee bụrụ onye nkesa nke Bio Merieux na Alere
Gbanwee na nyocha nke onwe, mmepe na mmepụta nke IVD, ma nweta asambodo ndebanye aha nke klas nke atọ, Asambodo Ndebanye aha 1class II na asambodo ndebanye aha 5 nke I nyere site na nchịkwa steeti na ọgwụ ọgwụ.
Ihe ịga nke ọma na-ewu usoro nyocha ihu igwe
Ihe ịga nke ọma mepụtara akwụkwọ nyocha nke oyibo coronavirus
Bụrụ onye ọrụ ogologo oge nke onye na-eweta ngwa ngwa kwalera na UNICEF, wee banye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nkwekọrịta ogologo oge
Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket,